Toolbox - Power Grender - Power Will Grender - MICConD စက်ပစ္စည်း
နေအိမ် / သတင်း / ဘလော့ / Toolbox ရှိမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာ - ပါဝါကြိတ်စက်
Toolbox ရှိမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာ - ပါဝါကြိတ်စက်
လျှပ်စစ်ကြိတ်စက်ကိုလည်းခေါ်သည်Multi-function လျှပ်စစ်ကြိတ်စက် ထက်တတ်သောကြိတ်စက်စက်ယန္တရားနှင့်ထက်တတ်သောကြိတ်စက်ကလောင်.၎င်းသည် toolbox တွင်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။အရွယ်အစားအရ၎င်းကိုသမားရိုးကျ, အသေးစားနှင့်မိုက်ခရိုခွဲခြားနိုင်သည်ပုံနှိပ်စာ. ဒီဆောင်းပါးမှာငါတို့မိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျားတို့၏အသုံးပြုမှုစိတ်ချရသော လျှပ်စစ်ကြိတ်စက်aကြိမ်မြောက်သက်ဆိုင်ရာအသိပညာအချို့။
1 ။လျှပ်စစ်ကြိတ်စက်၏မော်တာ220 ဗို့အား Volt alternating လက်ရှိအခြေအနေကိုအသုံးပြုသည်။ စွမ်းအားသည်ယေဘုယျအားဖြင့် 120-250 ဝပ်စ်တို့ဖြစ်သည်။ အမြန်နှုန်းကို 8000-30,000 RPM တွင်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
2. လျှပ်စစ်ကြိတ်တံ၏ပျော့ပျောင်းသောနှင်တံလွတ်လပ်စွာလှည့်နိုင်သောဝါယာကြိုးကြိုးဖြင့်ဆွန်းပျော့ကြိုးတစ်ချောင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ပျော့ပျောင်းသောနှင်တံ၏အဆုံးသည်ဘောပင်ပုံတွင်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ဘောပင်ပုံအဖုံးသည် 15 စင်တီမီတာအရှည်နှင့်အချင်း2စင်တီမီတာရှိသည်။ core ကို soft cable ကိုအားဖြင့်မော်တာနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ခ၎င်း၏ကျစ်လစ်သိပ်သည်းပုံသဏ္ of ာန်၏ ecause, tသူစစ်ဆင်ရေးအလွန်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်နှင့်အဆင်ပြေသည်။
3.လျှပ်စစ်ကြိတ်သမားများအတွက်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ:လက်ကို 0.3-2 မီလီမီတာလေ့ကျင့်ခန်းများဖြင့်တပ်ဆင်နိုင်သည်။ DARPING BITS မှလွဲ. , ဖြတ်တောက်ခြင်း discs များ, ကြိတ်ခွဲခြင်း, ခေါင်းများ, ဖြတ်တောက်ခြင်းအပိုင်းအစ၏အချင်းသည် 25 မီလီမီတာရှိသည်။ အချင်းအချင်းအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ပုံစံခွဲစိတ်မှုပြုလုပ်ရန်ဖြတ်တောက်ခြင်းလမ်းကြောင်းကိုသင်လွတ်လပ်စွာပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ခွဲစိတ်အကျယ်သည် 1 မီလီမီတာထက်မပိုပါ။ အထူထဲကို 0.7 မီလီမီတာထက်နည်းသောသံပြားများကိုဖြတ်တောက်သောအခါခွဲစိတ်ခြင်းသည်မပူပါ။ မတူညီသောပစ္စည်းများနှင့်ကွဲပြားသောပစ္စည်းများကိုဖြတ်တောက်ခြင်းသည်သံ, အလူမီနီယမ်, အလွိုင်, သစ်သား, ပလပ်စတစ်စသည့်ကွဲပြားသောပစ္စည်းများစသည့်အမျိုးမျိုးသောပစ္စည်းများစသည့်ပစ္စည်းများကိုဖြတ်တောက်နိုင်သည်။
4.Micro လျှပ်စစ်ကြိတ်စက်: များသောအားဖြင့်ငါt ကိုအပိုင်းသုံးပိုင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် - Control box, လက်ကိုင်နှင့်ခြေနင်းမြန်နှုန်း switch ကိုနှိပ်ပါ။ ၎င်း၏မြန်နှုန်းကထက်ပိုမိုမြင့်မားသောကြောင့်ကြီးမားသောလျှပ်စစ်ကြိတ်စက်,နှင့်30000-50000 RPM ကိုရွေးချယ်ခြင်းအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်ဖြစ်တည်ငြိမ်နှင့်ခင်ဗျားတို့ခဲယဉ်းခံစားရတယ်dItheringဒါကြောင့်ကောင်းမွန်သောထွင်းထုခြင်း, တံဆိပ်ခတ်ခြင်း, အရောင်ဖျော့ဖျော့ခြင်းနှင့်အခြားစစ်ဆင်ရေးများပြုလုပ်ရန်သင့်တော်သည်။
2. t ကိုပြီးနောက်သူလျှပ်စစ်ဓာတ်အားစက်များအတွက်လည်ပတ်နေသည်အကေြာင်း15-20 မိနစ်, ကျေးဇူးပြုပြီးရပ်တန့်ပြီးအေးမြပါစေထိုအရာဆင်း။
3.အကျွမ်းတဝင်မရှိသောထုတ်လုပ်မှုလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများသို့မဟုတ်ပြုပြင်ခြင်းပစ္စည်းများအတွက် ကျေးဇူးပြု. ချိန်ညှိပါအပေြာင်းလှျပ်စစ်ဓါတ်စွမ်းအားကြိတ်သောအရှိန်အထူးသဖြင့်အပူချိန်မြင့်မားမှုကိုခံနိုင်ရည်မရှိသောပလတ်စတစ်များ, ဖန်နှင့်အခြားပစ္စည်းများအတွက်။ မြန်နှုန်းနိမ့်စစ်ဆင်ရေးကိုအာရုံစိုက်ပါ, မဟုတ်ရင်ပစ္စည်းကိုမီးရှို့ခြင်းနှင့်ကြိတ်ဆုံပါလိမ့်မယ်ဉီးခေါင်းပျက်စီးလိမ့်မည်
4.ကျေးဇူးပြု. စွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုပထမဆုံးအကြိမ်အတွေ့အကြုံများကိုရှာဖွေရန် Electric Grinder ကို အသုံးပြု. ပထမဆုံးအကြိမ်စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါ။
5.ဗဓေလသစ်ဖြတ်တောက်ခြင်းစာရွက်သည်ပါးလွှာပြီးပျက်စီးလွယ်သည်။ ဓားထဲဝင်ပြီးညင်ညင်သာသာဓာတ်လှေကားကိုဖြည့်ပါ။ အဆိုပါဖြတ်တောက်သောစာရွက် workpiece မှ perpendicular ကိုစောင့်ရှောက်နှင့်မလှုပ်ပါနဲ့။
6.plug rol' ကိုချောင်ခြင်းနှင့်ကွေးခြင်းရှိမရှိပါဝါကြိုးသည်ကောင်းစွာချိတ်ဆက်ထားခြင်းရှိမရှိကိုမကြာခဏစစ်ဆေးပါ။
Multi-function လျှပ်စစ်ကြိတ်သမား ထစ်ကြိတ်စက်စက် legraving grinder ဘောပင် Micro လျှပ်စစ်ကြိတ်စက် ကြီးမားသောလျှပ်စစ်ကြိတ်စက် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကြိတ်ခြင်း ယုံကြည်စိတ်ချရသောလျှပ်စစ်ကြိတ်စက်